Samsung Galaxy Note3SM-N900မှာ Rootမချိုးဘဲ မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း ~ သား​ကောင်းရတနာ(နည်းပညာ)
2/15/2014 FONT များ, နည်းလမ်းများ2comments
Samsung Galaxy Note3မှာ Root မချိုးဘဲမြန်မာဖောင့်ထည့်ချင်သူတွေ အတွက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ပြီ ဖြေရှင်းခဲ့ရတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဖုန်းကိုစ၀ယ်လာစဆိုတော့ Warranty မပျက်ချင်သေးလို့ Root မချိုးဘဲမြန်မာဖောင့်ထည့်တာ နည်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်ကြည့်တယ်။ အဆင်ပြေဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကလိရင်းကနေ ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ အဆင်ပြေလို့ တခြားအဆင်မပြေသူများလည်း အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ရန် ပြန်လည်ဖောက်သည်ချလိုက်ပါတယ်။ Note3မှာ Rootမချိုးဘဲ မြန်မာဖောင့်ထည့်ချင်သူတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ........
1.ပထမဆုံး Zawgyi One TTF v2.0 ကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းထဲမှာ Install လိုက်ပါ။
2.ဒုတိယအနေဖြင့် iFont ကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူနိုင်သလို Playstore မှာလည်း ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ဒေါင်းယူပြီးရင် iFont ကိုဖုန်းထဲမှာ Install လိုက်ပါ။
3.တတိယအဆင့်အနေနဲ့ System Setting>>My Device>>Display>>Font ဆိုတဲ့နေရာမှာ
Font Style ကို Samsung Sams လို့ပြောင်းပေးပါ။
4.အပေါ်ကပုံအတိုင်းပြောင်းပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ iFont ထဲကိုဝင်ပြီး Install အောက်က Zawgyi One TTF ဆိုတဲ့နေရာမှာ Setကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
5.အပေါ်ကအဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Zawgyi-One Flipfont ကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူပြီဖုန်းထဲမှာ Installလိုက်ပါ။ပြီးရင်Display>>Font Style နေရာကို ပြန်သွားပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ Font Styleကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အောက်ကပုံအတိုင်း Iphone ဆိုတဲ့ Fontလေးကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။
6.ပြီးရင်တော့ မိမိ Samsung Galaxy Note3မှာ မြန်မာလို ဖတ်နိုင်ရေးနိုင် ပြုနိုင်ပါပြီ။
7. ရေးနိုင်ဖို့အတွက် Myanmar Keyboard လေးတွေတော့ လိုအပ်သေးတာပေါ့။ မရှိသေးရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းယူသွားလိုက်ပါ။
<<<Bagan Keyboard v3.1.2 Crackအားဒေါင်းယူရန်>>>
<<<Frozen Keyboard Pro Crack Versionအားဒေါင်းယူရန်>>>
<<<I text mm2 v3.0 keyboardအားဒီမှာဒေါင်းယူပါ>>>
Min Myint Oo7September 2016 at 18:36
အဆင်ပြေတဲ့နည်းလေး လုပ်ပါအုံး:-) :-)
C8816 များအတွက် Root, Sim Invalid (Network Unlock) and Myanmar Font
Huawei C8816 တွေအတွက် Root, Sim Invalid (Network Unlock) and Myanmar Font တွေကို one click လုပ်လို့ရပါပြီ C8816 အတွက်မြန်မာဖောင့်က ကျာ...
Dead Boot ဖြစ်သွားတဲ့ Huawei Honor 3C H30-U10 ကိုပြန်ကယ်ပေးမဲ့ Flashtool Firmware
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Boot သေသွားတဲ့ Honor 3C H30-U10 ဖုန်းလေးကို ပြန်ပြီး Boot ပြန်နိုးပေးမဲ့ 3C H30-U10(2GB Ram)V100R001CHNC00B118...
ဒါလေးကတော.ကိုကျော်စွာသွင်ရဲ.လက်ရာကိုကျနော်ကလိထားတာလေးတွေပါခင်ဗျာ Huawei hacker tool လေးနဲ. C8813 C8813D Y300C G610COOတို.ကို Netwo...
Huawei ဖုန်းများအဖြစ်များလေ့ရှိသည့် SIM Invaid , 3G Error, 1x Error, IMEI Error ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ Tool
Ko Myo Ko ko Zaw ဖန်တီးထားတဲ့ Huawei ဖုန်းများအတွက်အဖြစ်များလေ့ရှိသည့် SIM Invaid , 3G Error, 1x Error, IMEI Error ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ Too...